Taariikhaha sii deynta ee OnePlus 7T iyo 7T Pro ayaa mar kale la daadiyay | Androidsis
OnePlus wuxuu adeegsaday, ilaa jiilkii shanaad, taxanaheeda calanka ee ku saleysan laba nooc, kuwaas oo ah mobilada dhexe iyo noocyada kala duwan ee Pro. Shirkaddu waxay kaloo soo bandhigtay nooc saddexaad oo xitaa ka awood badan taleefannada loo yaqaan 'Pro' .Tani waxay ku dareysaa xarafka "T" magacyada, tusaalooyinka cad ee tanina waa OnePlus 5T OnePlus 6T.
Isla sidaas ayaa ku dhici doonta calanka OnePlus 7 y 7 Pro, in kasta oo aanu si sax ah u ahayn. Soo saaraha Shiinaha ayaa dhowaan ballaarin doona qoyskan taleefannada, laakiin daruuri maahan inuu la yimaado hal nooc oo dheeri ah, laakiin leh labo, sida muuqata. Taasi waa, waxaan heli doonnaa a OnePlus 7T iyo OnePlus 7T Pro, iyo taariikhahoodii la siidaayay mar labaad ayaa la sii daayay, markan si loo xaqiijiyo mid aan hore u ogaanay kuwa kalena ku muuji suuqyo kala duwan.
Horumarkii ugu dambeeyay waxaan ka wada hadalnay in OnePlus 7T Pro uu bilaabi doono 15 bisha Oktoobar, kaliya ayaa lagu xusay qalabkan, wixii nasa ka bartay OnePlus 7T. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka cusub, marka lagu daro xaqiijinta xogtan, sidoo kale waxay faahfaahinaysaa taas Qaabkan ugu dambeeya ee la magacaabay wuxuu ka imaan doonaa gacanta kii hore, iyo isla taariikhda. Maalintaas laga bilaabo, waxay u badan tahay in laga heli doono suuqa adduunka.
Sebtember 26th India Launch
10-ka Oktoobar Oktoobar US / EU Launch
15-ka Oktoobar Iibinta https://t.co/yKxDlzI1O3
- Max’ed J. (@Samsung_News_) August 19, 2019
Laakiin arimuhu way isbadalayaan markaan tagno Hindiya iyo Yurub / Mareykanka. Wadanka weyn ee Aasiya wuxuu horey u imaan doonaa, gaar ahaan soo socota Sebtember 26, intii Mareykanka iyo qaaradda Yurub ay 10 bisha Oktoobar. Wadamada kale iyo gobolada waxay u qalmi doonaan taleefoonada laga soo bilaabo taariikhda horaan ku soo sheegnay bilowga.
OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: isbarbardhig qoto dheer
Waa la ogaan doonaa goorta Shiinaha ay qaabilayaan, maadaama suuqani badanaa aan lagu qasan kuwa kale. Waxay u badan tahay in OnePlus cusub sidoo kale halkaas rasmi looga dhigi doono bisha Oktoobar 15, laakiin tani waa wax aynaan weli xaqiijin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus 7T iyo 7T Pro waxay sii deyn doonaan taariikhaha mar labaad
Sida loo isticmaalo raadinta codka Google ee Android